သံတွဲမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံကြီး ၏ လာဘ်စားမှု ကြီး ( Briberies ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သံတွဲမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံကြီး ၏ လာဘ်စားမှု ကြီး ( Briberies )
သံတွဲမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံကြီး ၏ လာဘ်စားမှု ကြီး ( Briberies )
Posted by ချာလီဂဇက်ဒလဝမ် on Jun 7, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
သံတွဲမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံကြီး မှ ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး နှင့် စာရေးကြီး ဦးတင်အောင် တို့သည် ခရီးသွားဗီစာ တစ်စောင် (တစ်ဦးလျှင်)
၂ဝဝဝဝ (နှစ်သောင်း) ကျပ်နှုံးဖြင့် စီးပွါးရေးသောင်းကြမ်းနေသည်မှာ ၁၉၉၃ နှစ်မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်၊
ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးအဆက်ဆက်ပြောင်းသော်လည်း ဈေးနှုံး မပြောင်းခဲ့ပါ၊ စာရေးကြီးဦးတင်အောင် ကမူ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ အပြောင်း
အလဲမရှိပဲ ယ္ခုထိ လာဘ် စား၍ ကြီးပွါး လျှက်ရှိနေပါသည်၊
အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူတို့မှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါ၍ ဟူသော ဆေးစာ ပြနိုင်မှ သာလျှင် လ.ဝ.က ရုံးမှ ဗီစာ ရရှိနိုင်သော
ဆေးစာ ဟုဆိုရာတွင်လည်း မည်သည့်မြို့ မည်သည့် နိုင်ငံ မှရေးပေးလိုက်သော ဆေးစာကိုမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းဆေးစာများကိုလည်း
သံတွဲမြို့ လ.ဝ.က ရုံးမှ လက်မခံပါ၊ သံတွဲမြို့ဆေးရုံ ဆေးခန်းများမှ ထုတ်ပေးသော ဆေးစာ ဖြစ်မှသာလျှင် ဗီစာလျောက်၍ရပေသည်၊
အထက်ပါ လာဘ်စားခြင်းကို မည်သို့ လုပ်ရ အံ့နည်း၊ ၁၈ နှစ်တိုင်တိုင် လာဘ်စားနေခြင်းကို မည်သူက မည်သို့ အရေးယူ ဆောင်
ယ္ခု လက်ရှိ ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး နှင့် အချီကြီးစား၍ ကြီးပွါးနေပါသော စာရေးကြီး ဦးတင်အောင်တို့ အား မည်သူတို့ က မည်သို့ အရေးယူ ဆောင် ရွက်ပါမည်နည်း..။
မိုးနတ်မင်းကြီး တို့ ရေ လူအများဒုက္ခ ရောက်အောင် လုပ်နေပါသော ငိုစား ရီစား သတ္တဝါ နှစ်ကောင်အား ထိမ်းချုပ်ပေး
တော်မူကြပါရန် တောင်းဆိုပါ၏ ခင်ဗျား ။
နယ်တွေမှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေ လာဘ်စားတာ က မြို့ကြီးတွေကရတဲ့ အကျင့် ကနေဓလေ့ထုံးစံဖြစ်နေပါပြီ။ မောင်မိုးညိုတာဝန်ကျတဲ့ မြို့ ပျဉ်းမနားဆေးရုံမှာ နံမယ်ကြီးစာရေးကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ “အန်တိုနီယိုမောင်လေး” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဦးမောင်လေးကအမည်ရင်းပါ။ တွေ့ရင်လူတကာကိုတကယ်ပျူငှာသလို၊ တကယ်လဲပေးရကမ်းရပါတယ်။ အထက်အောက်ကြီးငယ်မရွေး သင့်အောင်ပေါင်းတတ်ယုံမက မပေးရင်မလုပ်ပေးပါဘူး။ အပေါင်းအသင်းကောင်ရုံမက အထက်ကိုလဲ ကြွေးနိုင်မွေးနိုင်သူမို့ မြိုံနယ်ဆရာဝန်ကြီးအဆက်ဆက်ပြောင်းပေမဲ့ သူကတော့ ပန်းပန်လျက်ပါဘဲ။
“မင်းကြီးတာကထွက်တာ” မို့ အဖြေမရှိတဲ့ ပြဿနာထုပ်ကြိးပါ။
ခုတော့သတင်းစာတွေမှာ (ရန်ကုန်တိုင်းမှာ) နံမယ်ပျက်စာရင်းစသည်ဖြင့်တော့လုပ်နေပါပြီ။ ဘယ်လောက်ခံမလဲ၊ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိအရေးယူနိုင်မလဲ…စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ခက်တာက အရေးယူမှုတွေ၊ ဥပဒေတွေများလေ…ကြေး ကလည်းကြီးလာလေဆိုတာ…….
ဒီလူ ၂ ယောက်က ကြားထဲ ညပ်ပီးကျန်နေခဲ့တာ…ကျေးဇူးပါ ဗျို့…..ခုမှ မိတော့တယ်….လူများများသိလေ
ဦးတင်အောင် ဆိုတဲ့ လူက လဲ မျက်ဖြူ ဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဆိုတဲ့ လူမျိုး ထင်ပါတယ်….
သူလဲ မွတ် စ် ပါပဲ…ဇတ်တူသားမှ စားလို့ ကောင်းတယ် တဲ့…..မိန်တယ်တဲ့ဗျာ….
( လာဘ်စား ငနွား…ဒို့ပယ်ရှား )
အဲ့ဒါတွေ ဘယ်တော့ ပပျောက်မှာလဲ … ။ ကမ္ဘာတည်သရွှေ့တော့ ရှိနေဦးမယ်ထင်တယ်… ။ ဖိဖိစီးစီးမှ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ လူမရှိတာ … ဝေစား၊ မျှစားတွေချည်းပဲ .. ။
လ.ဝ.က ခရိုင်မှုး ဦးကိုကိုမောင် ကလဲ ခု ထိ အေးအေးဆေးဆေး ဒူးနှံ့ လျက်ပါပဲ….
သူ့ပစ်ချက်တွေ ဒီလောက်များတာတောင်…အထက်က အရေးမယူဘူး ပဲ…..ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး ရယ်
ဦးတင်အောင် ရယ် လ.ဝ.က မှုး ဦးကိုကိုမောင် ရယ် ပေါင်းပီးစားနေကြတာတော့ သေချာလွန်းပါတယ်ဗျာ..
အေးဗျာ…စားနိုင်တုန်း စားထားကြ ပေါ့…ပြန်အန် တဲ့အချိန်မျိုးလဲရှိ အုံးမှာပါ….
ဒီလို ကိစ္စတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပပျောက်မယ်မထင်ပါဘူး အရေးယူတဲ့ သူတွေကလည်း ဖိဖိစီးစီး မလုပ်နိုင်ဘူး အတိုင်ခံရတဲ့သူကလည်း သူတို့အတွက် အားထားရာက အသင့်ရှိနေတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ …
ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရပ်ရွာ အကြောင်း ဝင်ပြောရမှာ ခပ်ကြောက်ကြောက် ဖြစ်နေရတယ်…
လူ ခပ်ကြောင်ကြောင် တစ်ချို့ က Group လိုက်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသုံးတတ်လွန်းတယ်…
နောက်တော့ သိလာမှာပါ ..အဲဒီလို စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ လူမျိုးတွေ ဟာ နိုင်ငံချီတဲ့စကားမျိုး သုံးတတ်ကြတယ်.
ကိုယ့် အိမ် ကိုယ့်ရွာ တိုးတက်အောင် အရင်လုပ်ပါဗျ…အဲ့ဒါမျိုးလေးတောင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့….
ခု ကျွန်တော် လုပ်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးမပါဘူးဗျ…အများအကျိုးအတွက်ပါ….ကိုယ့်မွေးရပ်မြေအတွက်ပါ..
ဒီလိုလာဘ်စားတဲ့သူမျိုး ဘယ်သူမဆို ဆက်ပီးရေးနေမှာပါ….
ဒီ လာဘ်စား ဘီလူး ၂ ကောင် ကို သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးပေးကြပါ…
ဒီစာ ကို နေပြည်တော် လာဘ်စားမှု အရေးယူတဲ့ ဌာန ကို ပါ ဆက်ပို့ သင့်တယ် လို့ ထင်တယ် ဗျ ။ ဒါမှ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ နိုင်အောင် ။ အခုနောက်ပိုင်း တိုင်စာ ပို့ ရင် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးတာ ကို တွေ့ ရပါတယ် ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး တင်ပို့ ပေးခဲ့ရင် ပေါ့ ဗျာ ။
ကြခြင်း ရုံးရောက်ဂတ်ဗေရာက်ဖြစ်မည်ကိုကြောက်ကြခြင်းမှာအရိုးစွဲနေပါပြီ ယခုလိုအချိန်မျိုးတွင်လက်တွေ.
ဒီစာကို ..တင်တဲ့သူက..သူ့စာဘယ်ရောက်သွားသလဲချည်း..တခြားနေရာတွေမှာမေးနေတော့ကာ.. ရှိနေပါကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့.. မန်းလိုက်တာပါပဲ..။
ရွာသားတွေတင်တဲ့စာတွေဟာ.. တရက်တရက်တက်နေတာမို့ .. တောက်လျှောက်တော့ ရှေ့မျက်နှာမှာချည်း ရပ်မနေပါဘူး.. အဲဒါလေးလဲသိထားစေချင်ပါတယ်..။
ဟုတ် အန်ကယ်ကြီးခင်ဗျား…သည့်ခံမလို့ပါပဲ….ဒါပေမဲ့ ကူညီစောင်မမဲ့သူတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေ
မျိုး တွေ့လာရလို့..ကုန်းထ ကြည့်မိတာပါ…ထပါရစေနော်…ပြေလိုပြေငြား….
သူကြီးရေ ..စိတ်ဆိုးတော်မူပါနဲ့… Connection ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်…ဖွင့်ကြည့်တော့